धितोपत्र बोर्ड, अध्यक्ष र शेयरबजार : किन बोर्डले लगानीकर्ताको पक्षमा निर्णय लिन सक्दैन ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण धितोपत्र बोर्ड, अध्यक्ष र शेयरबजार : किन बोर्डले लगानीकर्ताको पक्षमा निर्णय लिन सक्दैन ?
on: March 04, 2019 लेख | दृष्टिकोण
धितोपत्र बोर्ड, अध्यक्ष र शेयरबजार : किन बोर्डले लगानीकर्ताको पक्षमा निर्णय लिन सक्दैन ?
शेयरबजारको सर्वोच्च तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र प्राथमिक अंग दलालबीच भित्रभित्रै बलिरहेको ‘भूसको आगो’ सतहमा आएको छ । बोर्ड अध्यक्ष डा. रेवत कार्कीले संसद्को अर्थ समितिमा दलालहरू ‘सक्षम, सुशासित र पारदर्शी’ नभएको भनेपछि दलाल संघले १४ ओटा प्रश्नसहित बुझाएको ज्ञापनपत्रको जवाफमा बोर्ड र दलालबीच चलेको पत्रयुद्धपश्चात् वार्तामा आउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यो घटना र अन्य प्रासांगिक विषयमा संक्षिप्त सिंहावलोकन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंक हुँदै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कार्यकारी बनेका कार्की शेयरबजारको तालुकी अड्डा बोर्र्डमा आएको पनि ४ वर्ष पुग्न अब ७ महीना मात्र बाँकी रहेको छ । बोर्र्ड अध्यक्षका रूपमा अन्तिम प्रहरको पनि अन्तिम प्रहरमा आइपुगेका कार्कीले बोर्र्ड आएदेखि नै शेयरबजारप्रति पूर्वाग्रह राखेको देख्न सकिन्छ । नेप्सेमा रहँदा चिच्याएर भाउ लगाउँदै हुने कारोबार प्रणालीलाई दलालको कार्यालयसम्म ल्याएर शेयरबजार र शेयर कारोबारलाई अत्यन्त ठूलो गुण लगाए । तर, शेयरबजारकै तालुकी अड्डामा आएपछि दलाल प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा सशक्त ढंगले विस्तारित गरेर अझ बढी गुण लगाउनुपर्नेमा गालीगलौजमा उत्रिए । शेयरबजार संवेदनशील क्षेत्र हो भन्ने राम्रोसँग बुझेर पनि बुझ पचाए । आफू मातहतका अड्डा (दलाल, स्टक, केन्द्रीय निक्षेपक आदि) प्रति त पूर्वाग्रही देखिए–देखिए कुनै दलीय टाँचा नलागेका लगानीकर्ताप्रति पनि पूर्वाग्रह राखेर दलीय स्वभाव पनि राम्रैसँग देखाउन भ्याए । वित्तीय क्षेत्रको नियमन निकायमा रहेको व्यक्ति तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सेर पत्रपत्रिकामा लेख छाप्न पनि भ्याए ।
शेयरबजारमा खपत हुने सूचना बैंकले बढी उत्पादन गर्छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि बैंकलाई दलाल अनुमति दिन्छु भन्दै बारम्बार बोलेर लगानीकर्तालाई रनभुल्लमा पारिरहे । कसैले माग गरिहाले पनि बेला भएको छैन र हुँदैन भन्दै सब–ब्रोकर जस्ता विधिमार्फत दलालको उपस्थितिलाई सशक्त बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा त्यसो पनि गरेनन् । पहिले उठेर निस्तेज भइसकेको अर्को स्टकको विषयलाई अनावश्यक रूपमा उचाले । भएको स्टकको पुनःसंरचना कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुको सट्टा ‘एउटा पोखरीको पानी अर्को पोखरीमा सारेर दुईओटै पोखरी’ सुकाउने बहुस्टकको अनावश्यक बहस गरेर समय बर्बाद पारे । भारत र पाकिस्तानमा एक्सचेन्ज बन्द गरिएको र गाभिएको बेवास्ता गरी अर्को स्टकको ‘बेसुरा बाजा’ बजाए । नेप्से र बोर्ड एकै प्रकृतिको संस्था होइनन् भन्ने बुझेर पनि व्यक्तिगत टकराव लिएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । शायद यही टकरावका कारण स्टकलाई दिनुपर्ने कतिपय अधिकार दिएका छैनन् । उदाहरणका लागि सूचीकरण विनियमावली अनुसार बेलैमा सूचीकरण नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई नेप्सेले जरीवाना तिराउन सक्छ । तर, सूचीकरण विनियममा भएका सूचीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कम्पनीका पदाधिकारी र अधिकारीलाई जरीवाना तिराउन सक्दैन ।
बोर्ड अध्यक्षका रूपमा उनका गतिविधि लगानीकर्ता र देश हितभन्दा कम्पनी हितमा बढी देखिएको छ । नेपालको शेयरबजारमा अहिले पनि एकादुई कम्पनीको शेयर मूल्यबाहेक अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य ‘कर्नरिङ र भित्रि सूचना’बाट निर्धारण हुन्छ । यति कुराको राम्रो जानकारी हुँदाहुँदै पनि बोर्डले उक्त कम्पनीलाई बोर्र्डमा निवेदन दिनुभन्दा ७ दिन अगाडिको १ सय ८० दिनको औसत बजार मूल्यलाई अधिक भार दिएर प्रिमियम बापत थप हुने रकम निर्धारण गर्न तदर्थ नीति बनाए । यसरी बनाइएको नीति मार्फत उक्त कम्पनीले ४ अर्ब हाराहारीमा प्रिमियम रकम हात पार्‍यो । पछि नेटवर्थको ४ गुणासम्मको रकम प्रिमियम थप्न पाइने अर्को वैकल्पिक विधि समेत ल्याइयो । त्यतिबेला बढीमा ७ सयसम्ममा बेच्न दिँदा सामान्य हुने (कम्पनीको नेटवर्थ त्यतिबेला १ सय ४३ रू. रहेको) मा कम्पनीकै हितको दिन सकिनेभन्दा दोब्बर मूल्यमा विक्री अनुमति दिँदा शेयरधनीले महँगो मात्र तिर्नु परेन राज्यलाई पनि लाभकर घाटा भयो ।
अवाञ्छित लाभको सिलसिला
तदर्थ नीति बनाएर अमुक कम्पनीलाई अवाञ्छित लाभ दिने प्रक्रिया शेयर विक्रीसम्म पनि कायम रह्यो । माघ १ गतेबाट लागु हुनलागेको आस्बा प्रणाली लागू हुनु २ दिनपूर्व विक्री अनुमति दिएर विक्री प्रबन्धक र निष्कासन बैंकलाई अवाञ्छित लाभ दिलाइयो । यसो गर्दा यी दुई संस्थाले राम्रै लाभ त लिए । तर, सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई गम्भीर असर पार्‍यो । बैंक र वित्तमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेका बेला शेयर आवेदन मार्फत अन्य बैंक र वित्तबाट रकम बाहिरिएर एकै बैंकमा जम्मा हुनपुग्दा त्यतिबेला आएको समस्याको असर अहिले पनि देखिइरहेको छ । त्यतिबेला ५० अर्बभन्दा बढी रकम २ महीनाभन्दा बढी एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत भएको थियो । एक हिसाबले यी गम्भीर आर्थिक कसूर हुन् । त्यस्तै अधिकार क्षेत्रविहीन सम्पत्ति शुद्धीकरण कानून विपरीत ‘कालो धन छानविन’ गर्ने भन्दै छानविन समिति बनाउने कार्य पनि एक प्रकारको गम्भीर कसूर हो । यसैको कारण शेयरबजारमा तीव्र गिरावट पनि आयो । यसबाट कैयौं लगानीकर्ता प्रताडित बनेर रातारात शेयर फाल्न बाध्य भए । यसको लाभ अर्को समूहले सजिलै लियो ।
उन्मुक्ति नै उन्मुक्ति
कम्पनीहरूले निरन्तर मूल्य संवेदनशील सूचना संशोधन गरिरहेका छन् तर पनि यस्ता कम्पनीका अधिकारी र पदाधिकारी दण्डित भएका छैनन् । बरु भएको कारोबार नै रद्द गरिदिएर कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएर लगानीकर्तालाई भने भुङ्ग्रोमा हाल्ने कार्यमा बोर्र्ड अग्रपंक्तिमा रहेको छ । कम्पनीको सभाले पारित गरेको हकप्रद प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नलगाएको घटनाको सूची पनि लामै छ । हकप्रद कार्यान्वयन गरेर मात्र विलयमा जाऊ भनेर आफैले दिएको निर्देशन अझ पनि बोर्र्डको वेबमा देख्न सकिन्छ । त्यस्तै हकप्रद र बोनस शेयरको आधार मूल्य गणनामा स्पस्ट विचार दिन नसक्दा आफ्नै कार्यकारी निर्देशकमाथि सांघातिक हमला भयो । शेयरबजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन र लगाउन मिल्दैन भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न नसक्दा यो विषय वर्षौं अल्झेर बस्यो । त्यस्तै अहिले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लगाउने भन्दै बोर्र्डले नीति बनायो । तर, यो किन लगाउने भन्ने विषयमा बोर्ड आफै स्पष्ट हुनसकेको छैन । त्यस्तै बैंकलाई दलाल बनाउने विषय समेत ‘आफ्नो चाहना’ नभएको भनेर अर्को जगहँसाइ गरेको पनि देखियो ।
अन्त्यमा, धितोपत्र बोर्र्डको स्थान उच्च हुन्छ । बोर्र्डको एकएक वाक्य शेयरबजारका लागि अमूल्य हुन्छ । बोल्दा निर्णय गर्दा होश पुर्‍याउने कार्यमा लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ । दलाली कसलाई दिने भन्ने मूल प्रश्न होइन आवश्यकता अनुसार जसलाई दिँदा पनि हुन्छ । सीधै बैंकलाई दिए पनि बीमा वा विमान कम्पनीलाई दिए पनि ती दलाल नै हुन्, एकै प्रणाली हो । यसलाई दिए पनि शेयरबजारको गुणात्मक विकास हुनुपर्छ । बैंकलाई दिएपछि केन्द्रीय बैंकले नियमन गरिदिन्छ बोर्र्डलाई हाइसन्चो हुन्छ भन्ने सोच राखिएको हो भने त्यो सरासर गलत बुझाइ हो । अवाञ्छित गतिविधि (भित्री कारोबार र कर्नरिङ) रोकिनुपर्छ ।
धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम : हकप्रदमा हकभन्दा बढी आवेदन दिन पाइने